AMPPS: Toetran'ny tontolo iainana fampandrosoana tranonkala amin'ny GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
AMPPS: Toetran'ny tontolo iainana fampandrosoana tranonkala amin'ny GNU / Linux
Mampihatra vahaolana Mpizara tranonkala (Webserver, amin'ny teny anglisy) amin'ny sehatra rehetra Rafitra miasa (Windows, MacOS ary GNU / Linux), misy fampiharana marobe misy, izay afaka miara-miasa misaraka sy tonga lafatra, na ampidirina ho an'ny a fametrahana mora sy matanjaka, toy ny tranga ny AMPPS.
AMPPS Izany dia vahaolana rindrambaiko tafiditra for web development, izay manolotra fametrahana sy fitantanana tsotra ny be mpampiasa sy be mpampiasa indrindra Rafitra miasa misy. Matetika manome rindrambaiko toy ny Apache, Mysql, MongoDB, PHP, Perl, Python, ankoatry ny hafa, amin'ny alàlan'ny a installer auto-sary amin'ny endrika Softaculous.
Ary na dia ao aza GNU / Linux Aleo foana io, indrindra amin'ny lafiny orinasa na fikambanana avo lenta na manan-danja, hampihatra ny vahaolana amin'ny Mpizara tranonkala mifototra amin'ny fametrahana, fikirakirana ary fampidirina an-tanana ny fitaovana tsirairay amin'izy ireo, misy tranga izay fianarana, fianarana, fikarohana na fifindra-monina a sehatra malalaka sy misokatra, aleony ampiasaina Vahaolana mitambatra, araka ny hitantsika tamin'ny lahatsoratray teo aloha, momba XAMPP.
ny Vahaolana mitambatramety tsy ny tsara indrindra, fa ny zava-misy avelao ny fametrahana haingana sy mora ny fampiharana tranonkala na ny fampiasa, ny add-on na ny fanovana miaraka amina totozy vitsivitsy, azonao atao ny manisy fiovana amin'ny lafiny fahombiazana kendrena izay tadiavinao, toy ny ampianaro ny mpianatra na ny mpamorona tanora miasa Mpizara tranonkala miorina amin'ny GNU / Linux.
1.1 Endri-javatra sy tombontsoa
1.2.1 Dingana 1 - Ampidino ny AMPPS
1.2.2 Dingana 2 - Mihazakazaha ny Installer AMPPS
1.2.3 Dingana 3 - Alefaso ny fampiharana AMPPS napetraka
1.2.4 Fanamarihana momba ny AMPPS
Kitapo feno izy io, azo ampiasaina amin'ny solosaina birao sy ny solosaina mba hanomezana rindran-tranonkala open source maro.
Izy io dia fonosana rindrambaiko kely, nefa feno, maimaimpoana izay mametraka ao anatin'ny minitra vitsy ary manolotra rindrambaiko fitehirizana tahiry toa ny MySQL, ary ireo fiteny fandaharana amin'ny traikefa iray mitambatra. Ho fanampin'izay, ahafahana manao kaody sy fitsapana PHP, Perl sy Python.
Mety indrindra raha ampiasaina amin'ny solosaina birao, amin'ny tanjona maro samihafa toy ny fampianarana sy / na fikarohana, na ny fiantohana fa milamina sy milamina ny fizotry ny fifindra-monina (tetezamita) manomboka amin'ny fampandrosoana ka hatramin'ny famokarana.
Manana tombony izy io, amin'ny alàlan'ny AMPPS, ny fikambanana mpamorona dia mamela ny fidirana amin'ireo rindranasa tranonkala open source malaza sy maimaimpoana hafa.
Manolotra fitantanana mora ny Apache sy MySQL izy io, ankoatry ny fanomezana Security Center izay manamora ny antoka amin'ny fametrahana ireo singa tafiditra ao anatiny.
Ary ny momba ny Databases, mamela anao hamorona tahiry MySQL sy SQLite marobe izy ary hitantana azy ireo mora foana amin'ny phpMyAdmin sy SQLite Manager.
Amin'ity fotoana ity dia hanao ny Ny fomba fametrahana de AMPPS momba ny ankehitriny sy ny ankehitriny Rafitra miasa (Distro) miorina amin'ny DEBIANINA 10.
Dingana 1 - Ampidino ny AMPPS
Mandehana any amin'ny fizarana fampidinana ny Tranonkala ofisialin'ny AMPPS, ary ampidino ny kinova ankehitriny misy Rafitra miasa GNU / Linux, araka ny aseho etsy ambany:
Dingana 2 - Mihazakazaha ny Installer AMPPS
Voalohany dia tsy maintsy manome ianao fahazoan-dàlana famonoana amin'ny installer alaina ary avy eo dia tokony hihazakazaka toy ny faka superuser na amin'ny maha mpampiasa rafitra manana alalana mpitantana, ny installer fisie ".run", izay ho an'ny tranga misy antsika ankehitriny, dia voatonona ao anaty lahatahiry "Fampidinana" ny manaraka: Amps-3.8-x86_64.run, araka ny aseho etsy ambany:
Dingana 3 - Alefaso ny fampiharana AMPPS napetraka
AMPPS dia apetraka amin'ny alàlan'ny toerana misy anao "/ Usr / local / ampps" miaraka amin'ireo rindranasa mifangaro hafa. Ary hampandeha ny AMPPS efa napetraka, tokony hihazakazaka toy ny faka superuser na amin'ny maha mpampiasa rafitra manana alalana mpitantana, ny rakitra azo ekena miaraka amin'ity anarana manaraka ity "Ampps", araka ny aseho etsy ambany:
Fanamarihana momba ny AMPPS
Na eo aza ny zava-misy fa tsy nisy lesoka natsipy tamin'ny fametrahana azy ary mora ny nanao azy, rehefa nifoha AMPPS tsy ny trano fidiovana natsangana rehetra no hita, ary ny Serivisy Apache tsy mandeha izany. Noho izany, tsy afaka nanomboka ny Mpizara tranonkala, na mahita ny Panel tontonana tsy ny Faran'ny mpampiasa Dashboard de AMPPS. Ary tsy hitako izay antony. Amin'ny consecuense, Manoro hevitra ny fampiasana ny XAMPP ho vahaolana mitambatra tsara kokoa noho ny AMPPS mihoatra ny DEBIAN 10.
Mpitantana Serivisy AMPPS rehefa mavesatra ny zava-drehetra:
Tontonana fitantanana AMPPS via web browser using the path: https://localhost/ampps-admin
Dashboard an'ny mpampiasa farany AMPPS via web browser using the path: https://localhost/ampps
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fametrahana sy ny fampiasana ny AMPPS amin'ny GNU / Linux, azonao atao ny manamarina azy Wiki ofisialy, ary raha mila fanazavana fanampiny momba ny Tontolo iainana fampandrosoana na fitaovana amin'ny GNU / Linux, mamporisika anao izahay hamaky ireo lahatsoratray teo aloha, izany hoe momba ny tsara indrindra na tena mahasoa Mpanonta, IDE, SDK ary fanaraha-maso kinova, ary ny karazana Mpizara tranonkala, Databases ary Fiteny fanoratana, firaketana an-tsoratra ary fanoratana.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «AMPPS», fampiharana mahasoa amin'ny endrika «Softaculous» mamela ny fametrahana sy fitantanana mora ny feno «Entorno de desarrollo» momba ny Rafitra miasa malalaka sy misokatra, dia mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » AMPPS: Toetran'ny tontolo iainana fampandrosoana tranonkala amin'ny GNU / Linux
Andro manerantany ho an'ny fampandrosoana maharitra: 4 martsa